MP oo ka maqan 50 degmo doorashooyinka foodda innagu soo haya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Amanda Lind, xog-heeynta xisbiga Miljöpartiet. sawir: Tomas Oneborg/TT och TT.
MP oo ka maqan 50 degmo doorashooyinka foodda innagu soo haya
La daabacay tisdag 22 maj 2018 kl 15.30
Jimcada foodda innagu soo heeysa ayuu furmi doonaa kulan weynihii xisbiga Miljöpartiet, MP.
Sida ay u muuqato xisbiga MP ayaan ka qeyb qaadan doonin doorashada foodda innagu soo haya qiyaastii tartanka 50 meeyo maamullada degmooyinka. Waa tiro aad uga badan kolka loo barbar dhigo xisbiyada kale ee xubnaha ku leh baarlamanka.
–Midda ugu hooreeysa ee sababta u ah waxay tahay in aannu luminey saddex daloolow laba xubnihii xisbiga, mana heyno dad aannu ku qorno liiska demooyinka ee xisbiga, sida uu sheegay Krister Haagman, guddoomiyaha xisbiga MP ee degmada Hjo, kana mid ah degmooyinka uu xisbigu ka rajada dhigay.
Farriin middaa la mid ah waxay ka soo yeeraysaa degmada Högsby, halkaasina oo ay Gunilla Schollin-Borg maamulka degmada u mataleeysay xisbiga Miljöpartiet muddo 30 sannadood ah. Waxay aamin-san tahay inay qabatay wixii ay qaban kartay, hase yeeshee ay u suurtageli wayday inay hesho cid kala wareegta masuuliyadda.
–Waxaan la xiriiray dhammaan xubnaha xisbiga, waxaan kaloo la xiriiray dad kale oo aan ku maleeynayay, hase yeeshee ma aanan helin cid liiska kow ka noqota, waa mid laga xumaado balse waa sidaa xaaladdu.
Ma jiro xisbi kale oo awoodiisu sidaa u daciif tahay. Kaalinta labaad ayuu geleyaa xisbiga Kristdemokraterna, oo aan maanta ku heey-san taageereyaal u metela doorashada 34 degmo. Halka xisbiyada qaarkood loo metelayo qiyaastii dhammaan 290 degmo ee dalku ka kooban yahay.
Hase yeeshee ay xaaladda xisbiga Miljöpartiet ka liidato doorashadii middan ka horreeysay. Xilligaa ayuu xisbigu magacaabay xubnihii uga qeyb geli lahaa doorashooyinka degmooyinka marka laga reebo 15 degmo, sida laga soo xigtay hayadda tirakoobka ee magaceeda loo soo gaabiyo SCB.
Xisbiyada ayey xubno metela uga qeyb noqon karaan doorashooyinka goleyaasha deegaanka kolka la helo wakiillo diyaar u ah, ugu dambeeyn laba maalmood doorashada horteed. Waxaa sidoo kale la dalban karaa waraaqaha doorashooyinka, hase yeeshee ay hayadda doorashooyinku dammaanad qaadayso muddo 45 maalmood gudahood inta doorashada ka horreeysa..
Xubno badan oo ka tir-san xisbiga mp ayaa sheegey iney lumiyeen xiisihii. Waxaa jira heshiisyo uu xisbigu la galey dawladda uu xubinta ka yahay oo aaney ku raacsaneyn, sida siyaasadda adag ee soo galootiga iyo iibintii shirkaddii shidaalka ee Vattenfall ee qodista godadka dhuxusha ee dalka Jarmalka.
Dadyoowga ka xun ayay ka mid tahay Maria Lindmark, ahna siyaasiyad degmada Borgholm.
–Kuma raacsani go’aammo badan oo uu xisbiga Miljöpartiet gaaray, waxaan dareemayaa inay igu adag tahay inaan waayadan dambe metelo xisbiga Miljöpartiet, sida ay sheegtay Maria Lindmark.
Waxay go’aan ku gaartay inay isaga tagto kursiga hoggaanka degmada oo ay qayb ka hayad 12 sannadood, mana jirto cid booska kala wareegeeysa. Krister Haagman ee degmada Hjo lama uu fajacsana inay isaga fariistaan xubno ka tir-san xisbiga MP degmooyin kala duwan.
–Waa natiijadii ka soo baxday inuu hoggaanka xisbigu ka doortay inuu qiime walba ku difaaco wada shaqeeynta dawladda. Dhibaatooyinkaa ayaa markaa ka abuurmaya ururrada degmooyinka ee xisbiga.
Amanda Lind, xog-haynta xisbiga Miljöpartiet oo sheegtay iney degmooyinka qaar ku howlan yihiin.
–Xaqiiqdii waa arrin laga xumaado. Waannu og soonnahey ineynaan 30 degmo ku heey-san wakiillo. Halka dhanka kale ey jiraan degmooyin ku howlan oo ey soo socdaan liisaska xubnihii uga qeyb geli lahaa doorashada, sida ay sheegtay Amanda Lind oo u warrantay laanta idaacadda ee P1 Morgon.
Amanda Lind ayaan ka welwelsanayn in xubno la’aanta xisbiga ka heeysata degmooyinka qaarkood aaney saameeyn ku yeelan doonin xaaladda xisbiga ee heer qaran.
–Waxaan qabaa rajooyin iney na soo gaaraan liisaska xubnihii degmooyinka nooga qeyb qaadan lahaa doorashooyinka, dhambaallo ayaa na soo gaareya. Wa muhiim in degmooyinka lagu leeyahey wakiillo. Waxaannu dooneynaa in aannu saameeyn ku yeelanno si aannu wax uga bedelno dawladda iyo degmooyinkaba. Waxaa sidoo kale i soo gaareya iney jiraan ololeyaal degmooyinka laga wado, inkasta oo aan la dooneeyn in liiska doorashada la galo, sida ay sheegtay Amanda Lind, ahna xog haynta xisbiga Miljöpartiet.